Waad badbaadi doontaa, | Apg29
Markii aad aqbasho Ciise si ay dhacdo in mid ka mid ah yaabab. Waxaa badbaadi doontaa - waxaa loola jeedaa badbaadiyey.
Waxaa jira cabsi ah tusaale u ah dadka ayaa kiniisaddii oo dhan nolosha, laakiin waxa ay wax fikrad ah sida si ay u badbaadaan. Sidaa darteed, waa in aan mar labaad anigu xoogga in la badbaadiyey by shakhsi ahaan hesho Ciise Masiix. Waxaa jirta waddo kale ma jiro. Waa marka aad aqbasho Ciise sida badbaadada meel aad noloshaada.
Waxaa, xaq waxaa, xaq ka dibna, waxaan la badbaadiyey iyo noloshayda ahaa loo bedelay oo aan marnaba noqon lahaa qof la mid ah!
Imaanshaha ee kaniisadda Pentecostal ee hore ee marxaladda on qeybta bidix ee kuraasta ee keydka ugu horeeyay ee jilbaha baan u xootay, in dhowr qof oo igu wareegsan. sidoo kale waxaan soo xusuusan, waxaa taas meel ka dhacaya. Maanta, kiniisadda la dhiso, laakiin weli waxaan tilmaami karaa meesha meesha ahayd meel aan xootay jilbahayga.
Johnny, wadaad cusub ee dhalinyarada, bal i soo ag jilba joogsaday, halka ay jiraan kuwo kuwa kale oo ay hareerahayga joogi jireen ii, oo wuxuu i weydiiyay:
- Ma waxaad ahaan jireen?
Waxaan ahaa yara by su'aasha nonplussed, laakiin tan iyo markii aan ahaa ma loo isticmaalaa in lagu baryo si aan kala go'a, oo qasdila'aan ku jawaabay:
- No, Anigu ma ihi.
- Marka aan arrintan loo sameeyo, ayaa sheegay in Jonny. Waxaan ka codsan ka hor inta aan ku weydiino. In salaada in qaadataa in aad aqbasho Ciise iyo badbaadi.
Tani, waxaan ku fikiray ay ka dhawaajisay wanaagsan, laakiin wax yar ka hor waxaan ku jiray inaad weydiiso, Waxaan u maleeyay "waxaa laga yaabaa in tani ay tahay fadeexad ah oo dhan waxaa ka mid ah, laakiin ka dibna waxa uu si fiican u soo baxday." Dadka Waxaa igu wareegsanaa gacmahoodii saareen on my dhabarka iyo garbaha ii on, oo waan ku soo qoday wejigayga gacmahayga ka dhanka ah kursi dheer ku madhay brown oo tukaday Jonny i hor iyo waxaan weydiistay inaan:
- Ciise, waxaan idiin la imid hadda.
- Ciise, waxaan idiin keenay in hadda!
- Ciise, ayaan aad qirtaan sida Eebahay!
- Waxaan qabaa, in aad ku dhintay dhimanayaan dembiyadayda.
- Waxaan rumaysanahay in Ilaah aad sara kiciyey kuwii dhintay ka soo!
- dembiyadayda oo dhan iga cafi!
- Waad ku mahadsan tahay Ciise in aad hadda ayaa i badbaadisay!
- Waad ku mahadsan tahay Ciise in aad hadda dembiyadayda oo dhan iga cafiyan yihiin!
- Waad ku mahadsan tahay in aan hadda ahay ilmo Ilaah!
Waxaan arkay ma Malaa'ig, ama wax kasta oo la tusay kale, mana maqlay wax codad laakiin kolkaas dabadeed ayaan ku neefsaday soo baxay iyo ku fikiray,
- Phew, hadda waxaa la sameeyey!
Xaqiiqdu waxay tahay badbaado in meel si degdeg ah markii aan helay ayaa ku nool Ciise Masiix ee noloshayda.
Marka aan ka hadlo dhacdadan, waayo, dadka, inta badan waxaan leeyahay, waxa aan ahaa kaniisad in i badbaadisay, mana cilmiga kasta, wadaad ma ama qaar ka mid ah dadka kale, laakiin waxay ahayd oo Badbaadiyeheenna ah ku nool, Rabbi Ciise Masiix!
Dhacdadani waxa aan u sheegi in aan kitaabkayga "The Night ugu dheer", oo si faahfaahsan dheeraad ah ee aan kitaabkayga ka socda "rabin The". Waxa ay noqon doontaa in 2020.
Halkan kor ku xusan, waxaan idiinku sheegay sida aan ku badbaadi. Waxaan ahaa badbaadiyey markii aan aqbalay Ciise iyo noloshayda ahaa loo bedelay.
Laakiin Anigu ma aan aqoonin badan ee Kitaabka Quduuska ah, mana aad u badan oo ku saabsan Ciise ayaan garanayaa ama sida ay u shaqeysay Christian ah ee nolosha, laakiin bartey, waan ogaa waxaan loo baahan yahay Ciise. Waana sababta aan isaga qaaday.
Haddii aan helin Ciise, ka dibna waxaan lahaa ayaan weli la badbaadiyey. Ma lahaa runtii ku dhicin wax dhibaato haddii aan lahaa oo aad u badan ee Kitaabka Quduuska ah oo caan ah si ay dhammaan dhinacyada shaqeeyay nolosha Christian laakiin haddii aanan aqbalay Ciise markii aan aan la badbaadiyey. Set taagan oo sidaas dhaco la Ciise.
Waxaad u baahan tahay Ciise
Ma aha arrin haddii aad tahay kaniisad iyo nooc live ugu fiican falay, waayo, haddii aadan haysan Ciise, ka dibna waxba set. Waxaad u baahan Ciise. Calan si aad u badbaadi doonaa.
Markii aad aqbasho Ciise si ay dhacdo in mid ka mid ah yaabab. Waxaa badbaadi doontaa - waxaa loola jeedaa badbaadiyey. Waxa kale oo mar kale dhalataan doonaa - Abuur Cusub, hal helo oo dembiyadiinna oo dhanna waa cafiyan yihiin, oo aad ka heli nolosha weligeed ah, waxaad noqon ilmo Ilaah, mid ka mid ah xaqa uu noqdo, muwaadin jannada, oo magiciisa ku qoran kitaabka nolosha ee samada helo, iyo wixii la mid ah.
Waxaa la sameeyey waxyaalo badan oo waaweyn si ay u aqbalaan Ciise. Haddii aad doorato in aadan aqbasho Ciise, laakiin aad tahay oo kaliya kaniisad sida haddii ay ahaayeen xarunta a, xataa marka midkoodna samayn mucjisooyinka kuwaas oo ah kuwa aan ku qoran.
waa in aad aqbasho Ciise
Sidaas waa inaad aqbashaa Ciise. Taasi waa marka aad ku badbaadi doontid. Kitaabku waxa uu ka hadlayaa waxyaabo badan oo ku saabsan Ciise hesho. Mid ka mid ah Aayaadka aan ugu jeclahay waa Yooxanaa 1:12. Waxa uu leeyahay:
Laakiin in alla intii aqbashay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, iyaga magiciisa rumaystay on in.
Si cad u sheegayaa in aad aqbasho Ciise. Oo bal yaa u aqbalaan Ciise oo dhan waa carruurta Ilaah. Ma aan Ciise ka gees ah, oo aad markaas ma aha carruurta Ilaah. Sidaas waa inaad aqbashaa Ciise si ay u noqdaan carruurta Ilaah.
Markii aan helay Ciise, waxaan u noqday ilmo Ilaah. Ka hor inta, waxaan halkaas joogin lahaa. Waxay u taagan yahay ama u dhacaa la Ciise haddii aad tahay ilmo Ilaah ama ma.
Fahmo sida ay muhiimka u ahaa
Waxaan ahaa badbaadiyey markii aan helay Ciise, iyo bilowgaba waxaan ogaaday sida ay muhiimka u ahaa. Sidaa darteed, waxaan had iyo jeer ahayd si taxaddar leh si ay mar walba ka hadlaan Ciise markii aan marag furay, waayo, dadka.
Waxaa dhacay markii aan la kulmay dad oo sheegtay inuu yahay Christian iyo xubin ka mid ah kaniisadda, laakiin waxaan had iyo jeer wareersan oo ku saabsan ay dareen-celin markii aan bilaabay hadalka ku saabsan baahida loo qabo in la aqbalo Ciise.
Waxay garteen in aan waxa aan la hadlayo ku saabsan. Sababta iyagu ma ay garan jiray, maxaa yeelay, iyagu ma ay badbaadin iyo Masiixiyiinta maxaa yeelay, iyagu ma ay garan, ama loo sheegay in ay leeyihiin in ay qaataan Ciise ka gees ah si ay u noqon lahaayeen Masiixiyiin.
Si aad u leeyihiin wax waa in aad aqbasho
Waxaa sidaas ma waxay ka caawisaa in ay ku sugan kaniisad, ama idinku waa Christian ah, laakiin waa in aad aqbasho qofka ku nool Ciise Masiix. waxba Waxaad leedahay ilaa aad og waxan helay.
Haddii aad hesho baabuur, ama baaskiil, aad u leedahay in this aqbalaan ka hor inta aadan u leeyihiin. In si la mid ah waa la Ciise. Haddii aad leedahay Ciise, waa inaad marka hore ka hesheen isaga. Oo aadan ku aqbalo Ciise, markaas waxaad weli ma aynu badbaadin.
Baybalku wuxuu ina barayaa in aad u badbaaddo waa waa in aad aqbasho Ciise. Waa kuwa heshay Ciise oo la badbaadiyey oo kaliya.
Kitaabku waxa uu leeyahay meelo dhowr ah waa in aad aqbasho Ciise. Aayaddan waxa uu waxaan kaliya ka akhriso uu leeyahay. Wuxu leeyahay in marka aad aqbasho Ciise, oo aad ilmo tahay Ilaah.
Taas macnaheedu waa in aadan horay u aqbalay Ciise, oo aanad ku cunug Ilaah. carruurta Ilaah waa kuwa heshay Ciise oo keliya.
All ma aha carruurta Ilaah. Waa kuwa heshay Ciise oo keliya.
Luukos 19: 5-6
Ciise goortuu meeshii yimid, ayuu kor u eegay oo ku yidhi, "Sakhayosow, dhaqso u soo deg,. Waayo, maanta waa inaan ku iman iyo joogtid gurigaaga" Sakhayos hoos dhaqsatay, oo waxay isagii uga helay kuwii farxad.
Meel meeshii Ciise yimid qaaday dadka isaga ka gees ah. Isaga iyo kuwii aqbalay la badbaadiyey oo lahaa iyagoo dembiyadooda cafiyan yihiin.
Sakhayos lahaa fantay ee geed Ciise aqbalay. Oo sheegay in ayuu isagii uga helay farxad.
Sakhayos ahaa badbaadiyey
Ciise wuxuu ku yidhi, "Maanta badbaadinta ayaa gurigan timid, waayo, isaguna waa ina Ibraahim.
Ka dib markii Sakhayos helay Ciise sida Ciise u marag furay isaga oo sheegay in uu hadda badbaadiyey.
Sakhayos ahaa badbaadiyey markii uu helay Ciise. Sidoo kale, waad badbaadi doontaa, marka aad hesho Ciise.
Dadka oo dhammu ee aan ku badbaadi. Waa kuwa heshay Ciise oo la badbaadiyey oo kaliya.
Waa marka aad hesho qofka ku nool Ciise Masiix waad badbaadi doontaa. Waxaa muhiim ah in ay xoogga saaraan in ay tahay Ciise keliya Badbaadiya.
Wax kale oo aan ahayn Ciise Badbaadiya waa. Salvation meel isla markiiba marka aad hesho Ciise yahay Rabbiga ah noloshooda.
Waxaa keliya oo isaga iyo mid kale ma jiro, iyo wax kale lagu badbaadinayo.
Ma jiro kaniisadda ama shirka Badbaadiya.
Ma aha baabtiis in badbaadiyay.
Ma aha Cashada Rabbiga, waayo, badbaadintu.
Ma aha reading Kitaabka Quduuska ah, waayo, badbaadintu.
Ma aha salaadda in badbaadiyay.
Laakiin waa Ciise Masiix oo badbaadiyay!
Waxaad tahay ee kaniisadda, sababtoo ah aadna ku badbaaddeen!
Waxaad ha naftaada waa la baabtiisay, sababtoo ah aadna ku badbaaddeen.
Waxaad qaadan wadaagis sababtoo ah aadna ku badbaaddeen.
Waad weydiinaya sababta oo aadna ku badbaaddeen.
Waxaad ka akhrin Kitaabka Quduuska ah sababtoo ah aadna ku badbaaddeen.
Ha aad aragto faraqa u? waxyaalahan oo dhan, sababtoo ah aadna ku badbaaddeen, ma si ay u badbaadaan in aad samayn. Waxaad ma beddali karto wax la Ciise Masiix. Isagu waa kaliya badbaadiye, waana kii waa in aad aqbasho si ay u badbaadaan.
Waxaad ku noolaan karaan sida badbaadiyey, aad ku tukatid salaadaha xaq iyo dhaqmaan diinta oo quduus ah, laakiinse idinku innaba ma aqbalo Ciise, ma aadna ku badbaaddeen. Waxaa kaliya marka aad qaadato in ay Ciise waadna badbaadi doontaa!
La taxadir inaad u sheegto
Ever tan iyo markii aan naftayda la badbaadiyey, Aad baan u taxaddar dadka sida ay sidoo kale la badbaadin doonaa sheeg.
Waxay ku badbaadi by aqbalayaan Ciise Masiix.
Laakiin in alla intii aqbashay (Ciise), wuxuu xaq u leeyahay in ay carruurtii Ilaah ku noqdaan siiyey, kuwa magiciisa rumaystay in. (John 1:12).
Aayaddani waxa ay ka mid tahay Aayaadka aan ugu jeclahay. Si cad u sheegay in ay tahay in aad aqbasho Ciise Masiix. Oo markaad yeeshaan, oo aad noqon ilmo Ilaah. In si kale loo dhigo, carruurta Ilaah yihiin "badbaadiyey," "ku dhashay mar kale", "beddeli" ama "nolosha weligeed ah".
aniga qudhaydu ka badbaadiyay aqbalayaan Ciise Masiix. Ma jirin kaniisad Waxaan helay, ama diin, laakiin waxa uu ahaa Ilaaha nool Ciise Masiix, Wiilka.
Waxay u tageen si aan u jilba ee keydka ugu horeeyay ee Church Pentecostal ee Ljungby. Qaar ka mid ah gacmihiisa saaray aniga iyo Pastor Youth Johnny Karlman loo Yeedhiyaa salaadda ii. Waxaan weydiistay inaan sare leh afkayga, iyo sida aan u aqbasheen Rabbi Ciise Masiix. Isla markiiba, waxaan la badbaadiyey iyo noloshayda ahaa loo bedelay.
Aan soo maray oo dheeraad ah oo aan ku soo maray mucjiso ah in uu yahay mucjiso ugu weyn in qof kasta oo dhan qayb ka mid ah waxay noqon kartaa. badan ugu weyn waa marka qof uu badbaadiyey iyo aqbalo Ciise Masiix. Ma jiro wax ka yar ka weyn. Waa mucjisada ugu weyn ee la heli karo.
Haddaba Ciise wuxuu galay oo Yerixoo oo magaalada ku dhex mari jiray. Oo bal eeg, waxaa jiray nin Sakhayos la odhan jiray, oo ahaa Foreman ah caadooyinkii, oo hodan buuna ahaa. Waxa uu doonayay inuu Ciise arko cid uu yahay, laakiin ma laga yaabaa inuu dadkii badnaa aawadood, waayo, wuu gaabnaa. Markaas ka hor ayuu ku soo orday oo wuxuu fuulay geed sukomoor inuu isaga arko, tan iyo Ciise jidkaas ayuu soo mari. Ciise goortuu meeshii yimid, ayuu kor u eegay oo ku yidhi, "Sakhayosow, dhaqso u soo deg,. Waayo, maanta waa inaan ku iman iyo joogtid gurigaaga" Sakhayos hoos dhaqsatay, oo waxay isagii uga helay kuwii farxad. Qof kasta oo u arkay si carro leh guryamaa: "Waxa uu ka bixiyey dembi leh." Sakhayos waa istaagay oo halkaas Rabbiga ku yidhi: ". Sayidow, nus ka mid ah waxa aan leedahay, ayaan masaakiinta siinayaa, oo haddii aan qof khiyaameeyay, waxaan dib u siin afar jeer" Ciise wuxuu ku yidhi, " Maanta badbaadinta ayaa gurigan timid, waayo, isaguna waa ina Ibraahim. Waayo, Wiilka Aadanahu wuxuu u yimid inuu doondoono oo badbaadiyo kii lumay "(Luukos 19: 1-10)..
Qaybtani waxa ay caan ka hadlaya Sakhayos badbaadada cashuurqaadihii. Waxaan doortaan in ay dhawr waxyaalood muujiyo qoraalka in aan ku sameeyey geesi.
Sakhayos ahaa badbaadiyey markii uu helay Ciise
Waxa uu leeyahay qoraalka in Sakhayos helay Ciise. Waxay heshay Ciise ee jeer kitaabiga ah. Sidaas waxa ee wax kasta oo aan helay ee la soo dhaafay la soo dhaafay. Halkan Sakhayos waa sidan badbaadiyey, oo uu naftiisa oo dhan waxaa loo bedelay.
Waxaa dhacay wax markii uu helay Ciise. Sidaas waxa uu ahaa ma dhaqan madhan oo markaas naftiisa ahayd la mid ah sida ka hor. No, uu bedelay. ayuu Tani waxay muujisay marka uu doonayo in uu lacag si ay dib ugu miskiinka iyo lacagta la siiyo afar jeer haddii uu qof la khiyaaneeyey.
Ciise Waxaadna helaysaan waxa waa qaab beddelidda
Sidaa darteed wax aan macquul aheyn in la yidhaahdo in Ciise haddaba waxaan kuu soo aqbalay aadna ku badbaaddeen, ka dibna nolol ku nool yahay si caadi ah mar kale in ceeb iyo guuldarro. No, si ay u aqbalaan Ciise Masiix waa toobadda. Waxaa jiro waa abuur lagu jiro iyo dhowrtid bedelay. Man nool ma naftiisa dembiga, khiyaamo, iyo cibaadada oo sanamyo ka tagay.
Waxaa la arkaa nin, haddii uu badbaadiyey. Ciise si cad u arki kartaa in Sakhayos waa in uu isbadalay iyo badbaadiyey. Ciise wuxuu waday diinta Sakhayos ayaa tusaale loogu talagalay dadka ku wareegsan oo u arkay. Waxa aad muujinaysaa haddii aad ku badbaadi ama ma. Haddaba waa inaad sii ma in ay ku noolaadaan aad nolol ceeb iyo Dulli.
Sakhayos la weydiiyey inay hoos u guuxi iyo aqbasho Ciise. Waxaad aan la sugi waa in si aad u hesho Ciise. Maalin maalmaha ka mid waxa ay dhab ahaantii laga yaabaa in goor dambe. No, isaga qaado halka uu jiro waqti. Ha sida Sakhayosow, dhaqso si aad u hesho Ciise.
Waxaa farxad u ah Ciise hesho
Waxa uu helay Ciise farxad! erayga aan jeclahay. Waxaa la ma caajiso si aad u hesho Ciise. Anigu ma arag qof kaliya si aad u hesho Ciise murugo. Waxaa had iyo jeer lagu farxisay. Intaa waxaa dheer, waxaa jiri doona, farxad ayaa jannada marka qof toobad keena oo la aqbalo Ciise Masiix oo aanay u badbaadin. Waxaa kaloo la rumaysan farxad ka mid ah walaalaha ah halkan hoos dhulka marka qof uu badbaadiyey.
Ilaah ninkii abuuray xidhiidh isu
Ilaah nin buu ka abuuray bilowgii. Wuxuu u abuuray Aadan iyo Xaawo iyo wuxuu haystay oo wehelnimada iyaga kula janno.
Man dhacay dembi galay
Laakiin markaas la rumaysan karin ku dhacay. Man jeedsateen on Ilaah iyo waxay tageen xagga jidka iyaga u gaar ah.
Aadanuhu mar dambe doonayay in ay ku socdaan weheshiga Ilaaha. Waa this taas oo ceeb.
Sababtoo ah ee dembiga ah in Aadan iyo Xaawo laga badiyay iyo Janno eryey waayo, waxay lahaayeen mar dambe in wehelnimo Ilaah.
Dhammaan way wada dembaabeen
Laakiin waxa uu kaliya ma ahan Aadan iyo Xaawo dembaabnay. La'aanteed, qof walba waxa uu qabtay. Waxaad sidoo kale.
Maxaa yeelay, dadkii oo dhammu way wada dembaabeen, inay ku jiraan xaalad la mid ah sida Aadan iyo Xaawo. Waxay yihiin laga badiyay iyo Janno eryey.
Ilaah wuu jecel yahay nin
Laakiin Ilaah wuxuu jecel yahay nin aad u badan in uusan rabin in iyada u noqon kuwa khasaaray.
Ilaah doonayay inuu badbaadiyo nin oo dhabarka loo soo celiyo in ay janno.
Ilaah Ciise dunida u soo diray
Laakiin waxaa jiray hal hab oo kaliya, waayo, Ilaah si loo badbaadiyo nin. Oo wuxuu lahaa inuu dunida ku soo diri Wiilkiisa keliya oo Ciise Masiix.
Ciise iskutallaabta, dhimashada iyo sarakicidda
Ciise garaacay, caayay, xumaadeen iyo qodax-caleemo saaray. Waxa uu la qodbay iskutallaabta ah oo ku dhintay.
Ciise la dhigay xabaashii ah, laakiin Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay ka soo ka dib markii uu dhintay muddo saddex maalmood ah.
Ciise ayaa samada loo qaaday, iyo wada carshiga Ilaah la fadhiistay. From waxaa jira, Ciise soo laaban doonaa.
Wax walba waa diyaar u ah samatabbixinta
Haddaba Ilaah ka dhigay wax walba oo cad si aad u samatabbixinta. All aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay aqbalaan Ciise Masiix.
Marka aad hesho Ciise waad badbaadi doontaa, oo heli wadaagis la leh Ilaah mar kale.
Iyo maalin maalmaha ka mid waxaad u timid guriga samada - Jannada - kuwaas oo hadda waa idiin furan yahay in ay mar kale.
Sidee ayaad ku badbaado?
Haddaba haddii aad rabto si ay u badbaadaan - badbaadiyey - waa in aad aqbasho Ciise. Waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay in ay sameeyaan maxaa yeelay, Ilaah ayaa wax walba cad kuu on lagama maarmaanka ah cross si aad u badbaadi - badbaadiyey.
Bal eeg, waxaan (Ciise) taagan albaabka oo garaacayaa. Haddii nin codkayga maqlo oo albaabka iga furo, waan u soo gelayaa in isaga iyo Diin in isaga la, isna wuu ila cashayn. (Rev. 3:20).
Aayaddani waxa ay la yaab leh ka Revelation cutubka saddex iyo aayadda 20, dad badan ayaa ku badbaadiyey on.
Waa in Ciise qudhiisa kuwa wax bilaaba in ay garaaca albaabka wadnahaaga. Laakiin waa in aad kaliya ee uu albaabka u furi doonaa. Ma dooneysaa inaad albaabka u furi Ciise iyo ha isaga?
Ciise ma xirto albaabka iyo casilay on by xoog. raalli ka ah waa in aad naftaada furi Ciise. Oo markaad yeeshaan, tallaabooyinka Ciise oo adigay kuu imanayaan galay. Kadibna waxaa laguu badbaadi doontaa, cafiyan yihiin, isbadalay iyo mar kale dhalan. abuuridda cajiib ah meesha aad ee.
Markaas waxaad wehelnimo iyo xiriirka ay la leeyihiin kuwa nool iyo sara kacay Ciise Masiix. Waa nolosha la yaab leh. Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in ay "sii hadhuudhka ah." Waxaa jira sawir xoog leh oo bulshada ka mid ah. Waxaad heli kartaa weheshiga Ilaaha nool Wiilka. Oo aad u helo haddii aad aqbasho isaga.
- Ma waxaad u heshay Ciise Masiix? Haddii aadan u sameeyeen, sababta aan samayn maanta. Salaadda ii soo jeediyay Weydii hoos ku cod dheer leh afkaaga iyo aad qalbiga ka rumaysatid - markaas badbaadada qaadataa kuu leh. Waxaa ugu weyn in aad waligaa qayb ka noqon kartaa.
Markii aad aqbasho Ciise sida Eebahaa, ka dibna waa in Ciise qudhiisa ku imanaya iyo qaadataa ilaa Hooygiisuna aad ee!
Sidee si ay u aqbalaan Ciise
Bal eeg, Waxaan ka dhex istaagaa albaabka oo garaacayaa. Haddii nin codkayga maqlo oo albaabka iga furo, waan u soo gelayaa in isaga iyo Diin in isaga la, isna wuu ila cashayn.
Waa marka aad aqbasho Ciise iyo weydiiso isaga inaan idiin imaado galay sida Eebihiin waad badbaadi doontaa. Markaasaa Ciise ma badbaado in aad in waadna badbaadi doontaa, mar kale dhalan iyo abuuridda cusub!
Markaasaa Ciise yimid inay ku noolaadaan aad ee
iyo in ay Masiix by rumaysad buu ku noolaan doonaa qalbiyadiinna iyo aad waa laga rujin doonaa iyo aasaas ku yeelataan jacaylka.
Marka aad hesho Ciise by iimaan, Ciise baa kuu imanaya galay iyo ku nooshahay oo aad qalbiga.
Ciise ayaa ugu jawaabay, "Haddii qof i jecel yahay, ereygayguu xajin doonaa, Aabbahayna waa jeclaan doonaa, oo waannu u iman doonnaa in ay ka dhigi Our guriga isaga oo leh."
Ciise qaadataa Hooygiisuna aad ee. Waxa uu macno ahaan waxaad u galay iyo live aad ee Doono. Oo isna wuxuu marna aad ka tegi doono, haddii aad isaga tago.
Laakiin haddii Ciise waa in uu si deggan aad ee, waa in aad isaga ay raalli ka aqbalo. Isagu ma galaan. Ciise waa mudane a. Laakiin haddii aad qalbigaaga u furtaa oo waxay isagii u helaan marka uu yimaado inaad galay!
Markaas oo keliya dhacdaa mucjiso
Waa markii ugu horeysay ee aad hesho Ciise wadnahaaga sida mucjiso dhacdaa. Markaas, wadnaha ruuxi - aad qabka gudaha gebi ahaanba bedelay iyo qaabayn. Haa, waad badbaadi doontaa. Tani nin kasta oo ay sameeyaan, wax ku bartaan, ama kiniisadda, laakiin keliya Ciise Masiix uma kartaa!
Sida aad aqbasheen Rabbi Ciise Masiix, sidaas oo live isaga,
Kitaabka Quduuska ah waa mid aad u cad in ay wax baraya. Waxay kuu sheegaysaa in ay aqbalaan in Ciise yahay Rabbiga. Qof kasta oo aan la aqbalo Ciise weli ma aynu badbaadin. Si ay u badbaadaan waa in aad aqbasho Ciise.
Kitaabku waxa uu leeyahay in haddii aad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga iyo aad qalbiga ka rumaysatid iyo waadna badbaadi doontaa. sidoo kale waa in aad ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga iyo hesho isaga sidii Rabbigu.
Ma waxay ka caawisaa in aad xaq ugu noqon karaa xubin ka mid ah kaniisadda, waa in aad sidoo kale aqbalaan in Ciise yahay Rabbiga.
Nin aan guriga yimid markii aan halkaas kor ahayd sannado badan. Waxa uu ka qayb galay shirar iyo milmay in si fiican. xubnaha Church isaga soo dhaweeyay oo ku farxay in uu u yimid. Oo sidaas daraaddeed iyagu raalli ku yiil. Iyagu ma ay ogayn sida ay ula uu daryeelka ruuxiga ahayd. Waxa ay ahayd sida haddii ay hore u dareemay in uu ahaa badbaadiyey, hadda in uu ahaa kulamada our. Laakiin oo kaliya sababtoo ah aad tagto kulan sidaas darteed waxaa macnaheedu ma aha in aad ku badbaadi. Sidaas ma lagu siri.
Waxaan ogaaday in uu jiray wax aan xad xaq Ninkan sidaas ayaan waxaan isagii weyddiistay in la yidhaahdo "Ciise waa Eebahay," laakiinse ma uu kari waayeen, maxaa yeelay, ma uu badbaadiyey. Sidaas daraaddeed waxaan nagged iyo nagged isaga wixii uu haystay oo la aqbalo Ciise iyo ka qiratid in isaga sidii Rabbigu si ay u badbaadaan. Haa, waalan ayuu ii at dhan qaylinayaan, laakiin ugu dambeyntii wuxuu siiyey in, Ciise aqbalay oo qirtay isaga sida Eebahood - oo mucjiso ahaa xaqiiqo ah! Wuxuu ahaa badbaadiyey!
Dhowr sano ka dib ayaan la kulmay isaga magaalo kale oo uu ahaa sidaas ku faraxsanahay in aan la qaylinayaan isaga in uu u baahan yahay in la aqbalo Ciise oo aanay u badbaadin. mucjiso Salvation weli haysta. Waxa uu sii raagayaan iyo weli halkaas ku noolaa in Ciise Masiix!
Marka wuxuu ahaa mucjiso ah? Oo waxay noqotay markii uu helay Ciise sida ay Rabbiga!
Kitaabku waxa uu si cad u sheegay in si ay u badbaadaan waa in aad aqbasho Ciise!
Mat 25:35 - Waayo, waan gaajooday oo aad i siisay wax ay cunaan. Waan harraadsanaa oo waad i waraabiseen. Qariib baan ahaa oo waad i soo dhoweeyseen.
Matthew 25:38 - Oo goormaannu ku aragnay adigoo qariib ah oo aad u soo dhaweeyay, ama adigoo qaawan oo aan ku huwinnay?
Matthew 25:43 - qariib baan ahaa oo ma waxaad igu dhowayn doontaa, adigoo qaawan oo aan dhar baad i, bukay oo xabsi ah iyo ma aad i soo booqatay.?
Luke 9:53 - Laakiinse dadkii ma ay dhowayn, waayo, wejigiisa ayaa u jeeday xagga Yeruusaalem.
Luke 10:38 - Iyadoo ay ahaayeen on jidkooda, Ciise wuxuu yimid tuulo, iyo qof dumar ah oo Maarta la odhan jiray ayaa gurigeeda gelisay.
Luke 19: 6 - Sakhayos hoos dhaqsatay, oo waxay isagii uga helay kuwii farxad.
John 1:11 - Waxa uu ku yimid kuwiisii, kuwiisiina ma ay aqbalin isaga.
John 1:12 - Laakiin in alla intii aqbashay, wuxuu siiyey xaq u leeyihiin inay carruurtii Ilaah ku noqdaan, iyaga magiciisa rumaystay on in.
John 4:45 - Markii uu Galili yimid, dadkii Galili qaaday isaga ka gees ah, maxaa yeelay, waxay arkeen kulli wixii uu ku sameeyey Yeruusaalem u tegi jireen Iiddii. iyagu ay jiraan lahaa wakhtigii iidda ah.?
Mat 18: 5 - Oo ku alla kii aqbala ilmahan oo kale magacayga i aqbalaa.?
Mark 9:37 - "alla kii ka mid ah ilmaha sida magacayga i aqbalaa Oo alla kii i aqbalaa, ma waxaad igu dhowayn, laakiin kii i soo diray.."
? Luke 9:48 - .. Oo wuxuu ku yidhi, "Ku alla kii aqbala ilmahan magacayga i aqbalaa Oo ku alla kii i aqbalaa, wuxuu aqbalaa kii i soo diray mid ka mid ah waa kan idiinku wada yar, isagu waa weynaa. "?
John 5:43 - Waxaan u imid in aan magaca Aabbahay, oo aad i aqbali weydeen. Laakiin qof doonista magiciisa ku, aad qabtaan isaga.
- John 13:20 aan runta kuu sheego: alla kii qof soo diro ayaa i aqbala, oo ku alla kii i aqbalaa, wuxuu aqbalaa kii i soo diray ".?
2 Corinthians 11: 4 - Waayo, haddii mid yimaado oo idinku wacdiyo Ciise kale kan aynu ku aanan ku wacdiyin, ama haddii aad heshaan ruux kale ama injiil ka duwan oo aan ahayn kan aad hore u heshay, ka dibna aad si farxad leh u aqbasho.
Efesos 6:14 - Qaado koofiyada badbaadada iyo seefta Ruuxa oo ah erayga Ilaah (Ciise).
Up 22:17 - Markaasaa Ruuxa iyo tidhaahdaan aroosadda, "kaalay!" Oo bal yaa ku odhan maqlo, "kaalay!" Iyo harraad ugu iman, iyo kuwa doonaya in ay noqon lacag la'aan ah biyaha nolosha (Ciise) in ay qaataan.
Tan waxaa jira aayado badan oo Bible in ay yihiin isku mid Ciise la aqbalay, taas oo, tusaale ahaan, ayaa sheegay in ay "hadalkiisii ​​aqbalay", "helay kafaaraggudka ah," iyo wixii la mid ah.
Falimaha Rasuullada 2:41 - Markaasaa kuwii hadalkiisii aqbalay la baabtiisay, oo tiradii xertiina maalin qiyaastii saddex kun oo koray.?
Falimaha Rasuullada 17:11 - Dadku waxay ahaayeen kuwo ka badan waxaa u furan ka badan Thessalonian ah. Waxay helay erayga iyagoo xiiso weyn oo baadhaya Qorniinka maalin kasta si aad u aragto haddii ay run ahayd.
1 Korintos 15: 1 - Walaalayaalow, waxaan doonayaa in aan idin xusuusiyo injiilka aan idinku wacdiyey, oo aad idinkuna aqbasheen iyo in aad si adag u istaagaan.
Falimaha Rasuullada 22:18 - waxaan arkay isaga, oo wuxuu igu yidhi, Soo dhaqso oo si deg deg ah Yeruusaalem tago, maxaa yeelay, halkan ma ay aqbali doonaa marag aad aniga igu saabsan.
Mark 4:16 - Waxay beeray dhul dhagax ah waa kuwa in si degdeg ah erayga farxad ku qaata, goortay maqlaan,
Mark 4:20 - laakiinse iyagu waa kii farcanka dhaco on ciidda wanaagsan, iyagu waa kuwa hadalka maqla, oo waxa oo midho dhala, mid soddon aqbalo, midna lixdan, midna boqol ".?
Mark 6:11 - Oo haddii meel aan idin soo dhowayn, ama ku dhagaysan adiga, ka dibna halkaas tegayo oo ka iyo ka baxdaan siigada cagihiinna ka dhabaandhaba inay marag ka gees ah ku ".?
Calaamadee 10:15 - runta ayaan idiin sheegayaa, Ku alla kii aan heli boqortooyada Ilaah sida ilmo ma uu geli doono ".
John 17: 8 - waayo, waxaan iyaga siiyey erayadii aad i siisay. Ay heleen iyaga oo si dhab ah u garteen inaan kaa imid, oo waxay aaminsan yihiin in aad i soo diray.?
Falimaha Rasuullada 8:14 - rasuulladii Yeruusaalem joogay markay maqleen in Samaariya helay ereyga Ilaah, waxay diray Butros iyo Yooxanaa.
Falimaha Rasuullada 11: 1 - Annagoo ah rasuullada iyo walaalaha Yahuudiya maqleen in dadka aan Yuhuudda ahayn ayaa sidoo kale helay ereyga Ilaah.
Rom 5:11 - Laakiin ma aha oo kaliya in, aan ayaa sidoo kale ka farxisay Ilaah xagga Rabbigeenna Ciise Masiix, kan aynu haatan heshiiska ku helnay kafaaraggudka.?
Filiboy 4: 9 - Waa maxay waxa aad baratay oo helay iyo maqleen oo ay arkeen oo igu taal oo, waa in aad sameyn. Markaas Ilaaha nabaddu ha idinla jirto.?
Cibraaniyada 6: 4 - Kuwa mar helay nuurka iyo dhadhamiyey oo hadiyaddii jannada, qayb ka heleen Ruuxa Quduuska ah
Muujintii 3: 3 - Haddaba sidaas daraaddeed xusuuso sidii aad u heshay oo aad maqasheen, xajiso oo toobad keenin. Haddii aadan hayn aad toosi, waxaan u imanayaa sida tuug, oo mana aad ogaan doontid saacadda aan kuu iman doonaan.
Marka aad hesho Ciise waadna badbaadi doontaa oo is dembiyadiinna oo dhanna waa cafiyan yihiin. Waxaad noqon ilmo Ilaah (Yooxanaa 1:12), oo dembiyadiinna oo dhanna waa cafiyan yihiin, oo aad ka heli nolosha weligeed ah oo samada ka noqon doona dalkaagii hooyo.
In Kitaabka Quduuska ah waxaa jira tusaalooyin badan oo ah sida ay dadka u heshay Ciise. Sakhayos ma, tusaale ahaan, waxay heli Ciise farxad (Luukos 19: 6).
"Maanta badbaadinta ayaa gurigan timid," Ciise wuxuu ku yidhi a aayado yar ka dib. Sakhayos waa sidan badbaadi - badbaadiyey markii uu helay Ciise.
Haddii aad rabto in aad aqbasho Ciise, waa la badbaadin iyo ilmo Ilaah, waxaad weydiisan kartaa salaadda soo jeediyay ee hoos ku.
salaadda waxaa loogu talagalay qaar ka mid ah laga fahmay. Waxay si qalad ah ay aaminsan yihiin in ay tahay salaada in badbaadiyay, laakiin waa Ciise Badbaadiya!
aadna ku badbaaddeen marka aad hesho Ciise, oo aad samayn kartaa in salaaddu:
Ayaan hadda aad hesho iyo in aad qirtaan sida Eebahay iyo Frälsare.Jag rumaysan tahay in Ilaah aad sara kiciyey kuwii dhintay.
Anigu dhenbi dhaafka dembiyadayda oo dhan iga.
Waad ku mahadsan tahay inaan anigu ahay hadda frälst.Tack in aad iigu dambi dhaafay iyo aad ugu mahad naqayaa inaanan hadda ahay ilmo Ilaah.
Bad salaadda kor ku xusan?